Author: Tajin Arataur
Sharci gaar ah oo baarlamaanku ansixiyay ayaa qeexaya dhaqangelinta qodobka Maxkamadda Sare waxay Golaha Wakiillada u soo jeedisaa puntlamd maxkamado cusub.
Maxkamaddu waa in ay u fasirtaa eedeysanaha dambiga lagu ciqaabay. Awoodaha iyo xilalka Maxkamadda Sare waxaa ka mid ah awoodaha iyo xilalka kale ee uu sharcigu banneynayo. Xoghayaha Maxkamadda sare ayaa noqonayaa Xoghayaha Maxkamadda Dastuuriga. Qofna ma burin karo, ma badali karo, ma diidi karo in uu u hogaansamo xukun maxkamadeed, haddii aysan xukunkaas badalin ama tirtirin Maxkamad ka sarreysa.
Eedaysanuhu wuxuu xaq u leeyahay in la dhawro nabadgelyadiisa iyo sharaftiisa aadaminnimo. Xildhibaanka Golaha Wakiillada dib ayaa loo soo dooran karaa. Doorashada ugu horeysa waxay noqoneysaa tan Golayaasha Deegaanka oo qabashada waqtigeeda xeer gaar lagu soo saari doono.
Maxkamaddu waxa ay u hoggaansamaysaa sharciga oo keli ah, maammul ahaan iyo garsoor ahaanba. Kala xadaynta awoodaha maamul iyo cashuureed ee Dowladda Dhexe, Gobollada iyo Degmooyinka waxaa lagu qeexayaa xeer dastuugka ah. Muwaadinnimada Puntland waxaa difaacaya sharci gaar ah, waxaana qeexaya xeer gaar ah sida lagu heli karo ama lagu waayi karo jinsiyadda Puntland.
Xeerar iyo nidaamyo ayaa lagu maamulayaa axsaabta siyaasadeed, kuwaasoo lagu qeexayo shuruuc kala gadisan oo ay Xukuumaddu soo jeediso, Golaha Dastuurma ogolaado. Doorashada Saraakiisha sare, sida saraakiisha sarsare ee kala ah: Dadweynaha Punltland tobankii sanaba mar baa la tirokoobayaa.
Ma jiri karo xeer ka horimanaya sharci Golaha Wakiilladu gudbiyeen.
Guddoomiyaha Maxkamadda sare ayaa noqonaya Guddoomiyaha Maxkamadda Dastuurka. Habka siyaasadeed ee Dawladda Puntland wuxuu ku saleysan yahay mabaadiida hogaamineed ee:. Shaqaalaha fasaxa ku jira waxba iska dhimi mayaan xuquuqdooda mushaar.
Difaacaha Xuquuqda Aadanaha, Labada xubnood ee ka mid noqonaya Guddiga Doorashada Puntland, iyo labada garsoore oo ka mid noqonaya Maxkamadda Dastuuriga ah, Goluhu wuxuu ku dooranayaa qaabka ku dhawaaqidda magacyada. Gacan taagga waxaa lagu beddeli kara habka codaynta elektarooniga ah marka Goluhu yeesho.
Maxkamadaha ciidamadu waxay gaar u yihiin qaadista dembiyada ay galaan xubnaha ciidamada oo keli ah iyo ciddii isu ekeysiisa. Guddoomiyaha Phntland Dhexe waxaa xilka u magacaaba, muddo shan 5 sano ah, Xukuumadda, iyada ayaana sababaha sharcigu tilmaamayo oo kaliya ku ruqseyn karta. Madaxweynuhu wuxuu galaa wada-xaajoodyada la xiriira shuruudaha Dawladda Puntland pjntland qayb galeyso Jamhuuriyad Soomaaliyeed ee Federaal ah, wuxuuna la saxiixayaa Dawladda Federaalka ah heshiis, kaasoo u baahnaan doona in laga ansaxiyo ratification Golayaasha Xukuumadda iyo Wakiillada.
Kormeeridda goob kasta oo lagu sameeyo ama la tuhunsan yahay in lagu gabood-falo Xuquuqda Aadanaha. Lahaanshaha sawirka other Image caption Baarlamaanka Puntland Waxaa magaalada Garoowe ee xarunta maamulka Puntland lagu ansixiyay dastuurka cusub ee la doonayo oo uu yeelanayo maamulkaas waxii hadda ka danbeeya.
Mucaaradka Dastuurkan cusub ayaa waxaa ku gacan seyray General Cabaahi saciid samatar oo horey wasiir uga ahaan jiray xukuumada madaxweyne Faroole. Qoysku waa aasaaska bulshada, waxuuna xaq u leeyahay dastjurka sharcigu daafaco.
Inta lagu jiro muddada xilhayntiisa Guddigu wuxuu leeyahay awoodaha ku cad Qodobka ee Dastuurka Puntland. Inta aan la gaarin hirgalinta nadaamka xisbiyada badan iyo doorashada, qofna xubin kama noqon karo wax ka badan hal qayb ee dawladda ka mid ah.
Marka Guddoomiyaha Goluhu maqan yahay ama uu xilkiisa gudan kari waayo, waxaa hawlaha Golaha sii wadaya Ku-Xigeenkiisa. Guddoomiyaha guddiga doorashooyinka Puntland. Guddoomiye, Guddoomiye Ku-Xigeen, iyo saddex 3 garsoore. Dawladda Puntland waxaa u bannaanaanaysa in ay dib u eegto arrimaha ku xusan faqradaha 1aad, 2aad iyo 3aad ee isla qodobkan, haddii: Sharciga doorashada ayaa sheegaya wakhtiga kama dambaysta ah ee ay tahay inay is casilaan haddii ay doonayaan inay tartanka doorashooyinka ka qaybgalaan.
Fadhiyada Golaha waxaa la horgeeyaa arrimaha ay isku soo raaceen guddi-hoosaadka ay khuseyso. Waa inuu leeyahay ugu yaraan aqoon dugsi dhaxe ama wax u dhigma. Taariikhda ay qabsoomeyso doorashadu waxaa goynaya Guddiga doorashada, waase in aaney noqon laba bilood ka yar ama afar bilood ka badan dhammaadka muddada golayaasha wakiillada iyo deegaanka markaas xilka haya.
Related Posts LEKSYKON NIEWIEDZY PDF
Kalsooni kala-noqoshada wasiirada waxaa soo jeedin kara ugu yaraan toban 10 xildhibaan. Bannaanbaxyada waxaa lagu joojin karaa sababo lid ku ah Diinta Islaamka, caafimaadka, anshaxa, amniga iyo xasilloonida dalka.
Inuu taageero dadka lagu sameeyo xadgudubyada Xuquuqda Aadanaha ka dhanka ah uuna ka difaaco maxkamadda horteeda ama si guud. Saxaafadda iyo warbaahinta xorta ahi waa ay ka madaxbannaan yihiin faragelin dawladeed, waxayna u hoggaansamayaan sharciga oo keliya. dashuurka
Waxaa sidoo kale goob joog ka ahaa wakiilo ka socday beesha caalamka sida Qaramada Midoobay iyo Midowga Africa. Madaxweynuhu wuxuu curiyaa ama oggolaadaa, si waafaqsan Dastuurka iyo shuruucda dalka, siyaasadda xukuumaddiisu fulinayso ee la xiriirta waaxyaha maamulka guud, fulinteedana ku kormeeraa iyadoo ay ujeedadu tahay in punntland Puntland gaaraan horumar dhaqan-dhaqaale oo dhan kasta ah.
Golaha Deegaanka degmo kasta wuxuu maamulaa hantida iyo dakhli kasta oo gacantooda soo gala, wuxuuna xisaab-celin tifaftiran u gudbiyaa Wasaaradda Arrimaha Gudaha. Dawladdu waxay ilaalinaysaa awoodda wax-gadashada ee dadweynaha, gaar ahaan kuwa danyarta ah.
Inta Aftida ka horeysa wuxuu Dastuurkani sii ahaanaya mid sharci ahaan lagu sii dhaqmo, laga bilaabo marka uu Golaha Wakilladu ee Puntland ansaxiyo, isagoo badalaya kii ka horeeyay ee ku meelgaarka ahaa. Ethiopian troops fighting al-Qaida-linked militants in neighboring Somalia will soon return home, Ethiopia’s prime minister said Tuesday. Guddiga Doorashada Puntland ayaa ka baarandegeya dokumentiga xisbigu soo bandhigo, waxaana la isku hortaagi karaa, haddii barnaamijka ama xeer-hoosaadkiisa ay khilaafsan yihiin Dastuurka iyo shuruucda kale.
Waxaa reebban in la soo rido ilmaha caloosha hooyada ku jira, haddii aanay jirin xaalad adag oo hooyada nolosheeda khatar gelineysa, uuna caddeeyo dhakhtar aqoonteeda leh. Dawladdu waxay ahmiyad gaar ah siineysaa daryeelka iyo barbaarinta dhallinyarada oo ah hogaamiyaasha dalka ee berrito, waxayna u hawlgalaeysaa: Wasiirku wuxuu fuliyaa siyasadda xukuumadda ee la xiriirta wasaraddiisa.